Maxaad Kala Socotaa Shirkadda Baaxadda Weyn Ee (Victoria Juice Company Ltd)? – Codka Qaranka Tanadland
Arar Iyo ujeedo :-
Maqaal kaan khasadka aan ka leeyahay qormadiisa waa labo arimood. 1) Muhiimadda kowwaad waa “Dan ka hadal” aan uga gol-leeyahay in aan ogeysiiyo ganacsatada soomaaliyeed ee caalamka ku kala firirsan, siiba
mulkiileyaasha baqaarada jimlada leh iyo ganacsatada gedisleyda ah in shirkadda (Victoria Juice Company Ltd) ay dooneyso wakiilo cusub. Wakiiladaas oo looga baahanyahay inay iibiyaan cabitaanada shirkadda (Victoria Juice Company Ltd), khaasatan 11 -ka nooc ee ay shirkaddu ku soo kordhisey cabitaanadii ay horay u soo saari jirtey shirkaddu oo loo yaqaan (Tamu Fruit Juice). 2) Ujeedada kale ee aan uga dan leeyahay maqaal kaan waxa weeye “Xogwaran” aan uga hadlayo waxqabadka iyo taariikhda shirkadda baaxadda weyn ee (Victoria Juice Company Ltd).
Wershaduhu waa waxa ugu muhiimsan ee dad iyo dal uu ku horumaro. Wershadleyda umadi ay leedahayna waa hormuudka ugu muhiimsan ee umad kasta u horseeda horumarka. Ma’ay suurowdo inuu dal horumar gaaro haduusan lahayn wershado soosaara badeecado uu dalkaasi dibedda u dhoofiyo, isla markaasna baahidiisa daboola oo wershadeeya qayraadka dalkaas. Horumarka sancada wershaduhu waa astaanta lagu garto umad horusocod ah. Soomaalidu waxay leedahay wershado badan oo cabitaanada soo saara. Wershaddahaas oo intooda badan ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalka soomaaliya. Soomaaliya waa dhul hodan ah oo ay wax kasta ka baxaan. Laakiin nasiibdaro wershadaha cabitaanka soo saara ee soomaaliya ku yaala oo dhami waa cabitaano kiimiko laga sameeyo dibadana laga keeno. Cabitaanadaas oo ah kuwa kiimikada “Soda” laga sameeyo ee guud ahaan afka qalaad lagu yiraahdo (Fizzy Drinks). Sida cabitaanada samayntooda laysinka loo qaato ee 7-up, Pepsi,Coca, Fanta, Sprite, Mirinda iwm.
Shirkadda (Victoria Juice Company) marka la eego cadadka wax soosaarka shirkadda iyo baaxadda ay leedahay, waxaa la orankaraa waa shirkad naadir ku ah wadamada bariga afrika. Tusaale ahaan, wadamada (Australia), (Canada), (US) iyo yurubta galbeed suuqyada ugu waaweyn ee laga adeegto, marka aad gashid laymanka ay yaaliin cabitaanada dalag-mireedyada laga miiro, sida (Canbaha), (Saytuunka), (Tufaaxa), (Canabka), (Muuska) iwm. Oo aad eegtid shirkaddaha cabitaanada soo saara, waa ay adagtahay inaad heshid shirkad afar cabitaan oo kala duwan soo saarta. Sababta oo ay tahay hal cabitaan markaad soo saareysid waxaad u baahantahay wershad kaamil ah iyo shaybaar dad aqoonlihi ay joogaan. Laakiin shirkadda (Victoria Juice Company Ltd) waxay leedahay meel aro alle ah oo ay ku yaaliin wershaddo badan. Waxayna halkaas ku samaysaa cabitaano sadex cayn ah oo kala sumad duwan. Sida cabitaanada la qaso ee sumaddoodu ay tahay (Victoria Juice Powder Ltd), 2) Biyaha caagadeysan ee la cabo oo ay sumaddoodu tahay (Victoria Water Drinks), 3) Cabitaano dalag-mireed laga miiray oo 11 dhadhan oo kala duwan ah sumaddooduna ay tahay (Tamu Fruit Juice).
Shirkadda (Victoria Juice Company Ltd) Iyo Waxqabadkeeda :-
Shirkadda (Victoria Juice Company Ltd) waa shirkadda leh wershedda ugu weyn ee cabitaanka oo ay soomaalidu ku leedahay wadamada bariga afrika. Shirkadda (Victoria juice Copany Ltd) waxaa la aas-aasay sanadkii
(2005) ka. Waxaana shirkadda warshaddeedu ay ku taalaa daafta koonfureed ee magaalada (Nairobi). Qaasatan aaga wershadaha ee xaafadda (Mlolongo) oo ay dhexmarto wadada magaalada Mombasa aada. Shirkadda (Victoria Juice Company Ltd) intii ka horaysey sanadkii 2011 -ka waxay samaynjirtey cabitaano noocyo badan oo budo ah. Waxay kaloo ay shirkaddu soo saarijirtey biyaha nadiifka ah ee caagadeysan. Cabitaanada la qaso ee ugu badan oo dukaamada soomaalida (Bariga Afrika), (Australia), (Canada), (US) iyo yurubta galbeed ay iibiyaan, badankoodu waa cabitaanada (Victoria Juice Powder). Cabitaanadaas oo ah kuwo baakaddo ku jira iyo kuwo qasacadeysan. Shirkaddu waxay magaalada (Nairobi) ay ku leedahay labo xafiis. Xafiiska guud ee xarunta shirkadda oo ku yaala (Mlolongo) iyo xafiiska xaafadda islii.
Cidii danaynaysa inay shirkadda la macaamisho waxay la xiriiri kartaa wakiilka shirkadda ee dalka ay joogto u fadhiya, hadii dalka aad joogtid aysan shirkaddu wakiil ku la hayna la xiriir xarumaha shirkadda ee magaalada (Nairobi) ku yaala.
Xafiiska guud ee xarunta Shirkadda (Victoria Juice Company Ltd)
Company address: Beijing Road off Mombasa Road,
Mlolongo near Weigh Brigde
P.O. Box 17692 – 00502Nairobi, Kenya
Telephone: 254-0722 228 600
CEO: Mr. Mohamed Haji Isse “Maxamed Dhere”
Xafiiska Xaafadda Islii Ee Shirkadda (Victoria Juice Company Ltd) Company Postal Address : 71575-00622 Juja Rd, Eastleigh , Nairobi. Phone+254-20550192 www.tamu.com
Waxaa kaloo xusid mudan in intii ay shirkaddu cabitaanada budoda ah ay samaynjirtey, inay shirkaddu suuq fiican haysatey oo ay wadamo badan u dhoofinjirtey cabditaanada ay soo saarto. Cabitaanadaas oo ah kuwo qasacadaysan iyo kuwo baakado ku jira. Shirkadda (Victoria Juice Company Ltd) waagaas baqaarada waaweyn ee alaabta jimladaa iibiya “Wholesalers”,
waxay u dirijirtey cabitaano uu shirkaddaha gedisleyda ah magacoodu ku qoranyahay. Cabitaanadaas oo isugu jira dhadhamo kala duwan sida, (Qare), (Canbe), (Saytuun) iyo caynado kale. Cabitaanada budada ah ee shirkadda (Victoria Juice Company Ltd) ay samaynjirtey waxay ahaayeen cabitaano aad u tayo wanaagsan oo la jecelyahay. Waagii ay shirkaddu soo saarijirtey cabitaanada budada ah iyo biyaha caagadeysan waxay shirkaddu lahaanjirtey mareeg la yiraahdo www.victoriajuiceco.com oo hada hawada laga saaray.
Dabayaaqadii sanadkii (2010) -ka (Victoria Juice Company Ltd) waxay wadanka Germany ka soo iibsatey wershad casri ah oo aad u balaaran. Wershad daasina waxay bilowday sanadkii (2011) -ka bilowgiisii samaynta cabitaano 11 dhadhan oo kala duwan ah. Lagana sameeyey dalag-mireedyada wadamada kulaylaha ah ay hodanka ku yihiin sida, 1. (Mango), 2. (Mango Punch), 3. (Guava), 4. (Orange), 5. (Orange and Carrot), 6. (Multi vitamin), 7. (Apple), 8. (Fruit Cocktai), 9. (Mixed Fruit), 10. (Banana), 11. (Peach & Milk), 12. (Mango, Orange & Milk).
Horukaca Ay Samaysay Shirkadda (Victoria Juice Company Ltd) :-
Wadamada bariga afrika wershadaha soosaara cabitaanada dalag-mireedku waa wax naadir ah. Wershaddaha cabitaanada soo saara ee ku yaala bariga afrika, cabitaanada ay soo saaraan waxay u badanyihiin nooc ka samaysan kiimiko sida kuwa afka qalaad lagu yiraahdo (Fizzy Drinks). Balse marka ay noqoto cabitaanada laga miiro dalag-mireedka beeraha ka soo go’a, waa wax naadir ah inaad hesho iyaga oo warshadeysan hadaad heshana haba tayo wanaagsanaadeene waxa ay soo saaraan waa hal cabitaan.
Shirkadda (Victoria Juis Company) waxay dowladda kenya ka iibsatey sanadkii (2010) -ka dhul-beereed baaxaddiisu ay dhantahay (1400 Hectare). Dhul beereed kaas oo ay shirkaddu ugu talogashay inay ku beerto dalagyada geedmiroodyada cabitaanada laga miiro. Sanadkii 2011 -ka shirkadda (Victooriya Juice Company Ltd) waxay bilowday soo saarida iyo suuqgeynta 11 cabitaan oo kala duwan, Isla sanadkii 2011 -ka shirkadda (Victoria Juice Company Ltd) waxay xarumo waaweyn ay ku yeelatay magaalooyin badan oo ku yaala wadamada (Kenya) iyo (Tanzania). Gaar ahaan magaalooyinka (Nairobi), (Mobasa) iyo (Darasalaam). Waxayna shirkaddu ku guuleysatey inay cabitaanadeeda gaarsiiso 5 wadan oo bariga afrika ku yaala. Saas oo ay tahay shirkadda (Vigtooria juice Company Ltd) suuqa ugu muhiimsan ee ay xooga saarayso waa dalka maraykanka, oo hada ah dalka 3-aad ee shirkadda (Victoria Juice Company Ltd) cabitaanada ay u iibgeyso marka laga reebo (Kenya) iyo (Tanzania). Hadafka ugu weyn ee ay shirkaddu baadigoobka ugu jirto waa inay heshiis la gasho shirkadaha waaweyn ee leh suuqyada laga adeegto, ee ku yaala wadamada (Maraykanka), (Canada) , (Yurub) iyo wadamada (Khaliijka).
Wadanka kale ee ay shirkaddu muhiimadda gaarka ah siinayso oo aysan weli wakiilada ku lahayn waa dalka soomaaliya. Shirkadu waxay samaysay wakiilo badan oo shirkadda hawlaheeda ganacsi uga wakiil ah, una qaabilsan wadamada ay wakiilka ka yihiin. Taasoo ay qayb ka tahay maamulka iyo wakiilashada maamul hoosaadyada shirkadda (Victoria Juice Company Ltd). Walow ay shirkaddu weli u baahantahay wakiilo kale oo badan oo badeecaddaha shirkadda jimlo u iibiya. Magaalada Nairobi soomaalidu waxay ku leedahay wershado yar-yar oo u badan kuwa biyaha caagadeyasan soo saar. Laakiin shirkadda (Victooria Juice Company Ltd) waa shirkadda keliya ee cabitaanka la miiro soo saarta oo ay soomaalidu ku leedahay bariga africa
Shirkadda (Victoria Juice Company Ltd) maxay uga duwantahay shirkaddaha cabitaanka ee carabaha laga Keeno :-
Shirkadda (Victoria Juice Company Ltd) shirkaddaha tartanka kula jira waxaa ugu muhiimsan shirkaddo wadamada sucuudiga iyo masar laga leeyahay, oo soomaalidu ay mudo dheer macaamiil u ahaayeen. Shirkaddahaasi waxay cabitaankooda u sameeyaan hab aad u qaali ah. Geed-miroodyada ay cabitaanada ka miiraanna waxay ka soo gataan wadamo qaarado ka fog ku yaala. Marka si ay macaash uga sameeyaan badeecadahaas qaaliga ah waxay sameeyaan cabitaano tayadoodu ay liidato. Islamarkaasna miisaankoodu uu yaryahay oo ku jira dhalooyin yar-yar. Marka shirkadda (Victoria Juice Company Ltd) si ay cabitaanada carabta suuqa uga saarto waxay soo saartay cabitaano ka dhadhan wanaagsan cabitaanada carabta, kana miisaan weyn cabitaanada carabta oo ku jira dhalooyin iyo caagag ka mug wey cabirka cabitaanada carabta. Waxaana la filayaa in shirkadda (Victoria Juice Company Ltd) marka ay suuqyada sucuudiga iyo masar ay ku faafto, inay shirkaddaha carabta suuqa ka saarto.
Mar aan fogeyna waxaa la filayaa shirkadda (Victoria Juice Company Ltd) inay cabitaanadeedu gaaraan guud ahaan geyiga soomaaliyeed oo dhan, Ayna cabitaanadooda ku geliyaan soomaaliya gawaari iyo maraakiib. Shirkadda (Victoria Juice Company Ltd) inaysan ilaa iyo hada aysan soomaaliya wakiilo u joogin, cabitaankeeduna uusan weli gaarin ayaa waxaa loo aanaynayaa shirkadda oo heshay suuq aysan dabooli karin. Laakiin maadaama ay shirkaddu wax soo saarkeedii ay kordhisey hada iyada ayaa u baahan inay dhanka soomaalida ay u fido. Bal malee saamaynta cabitaanada shirkadda (Victoria juice Company Ltd) ay soomaaliya ku yeelandoonaan marka ay soogalaan?, oo baararka iyo hoteelada soomaalidu ay fursad u helaan iibinta 11 cabitaan oo kala duwan?.
Waagii barisamaadka ahaa waxaan maqlijirey hees “Banaadiri” ah oo miraheeda ay ku jiraan “Liin iyo caano waa la kala leexiyaa”. Waa run oo liin iyo caano hadaan la kala leexin oo laysku daro qasaaro ayaa ka dhasha oo waa ay kala go’aan. Laakiin shirkadda (Victoria Juice Company) maadaama ay labaratory dad aqoonlihi ay joogaan ay leeyihiin caanaha iyo liinta waa ay isku daraan, oo waxaa jira nooca “Cocktail Drinks” ka loo yaqaano ah oo ka samaysan (Canbe), (Liin) iyo (Caano). Waana cabitaan dhadhan wanaagsan oo ay dadku aad u jecelyihiin.
Shirkadda (Victoria Juice Company) ayaa waxaa iska leh mid ka mid ah maalqabeenada waaweyn ee reer Tanadland. Khaasatan kuwa fadhigoodu uu yahay magaalada (Nairobi). Nin kaas oo ah nin caan ah oo la yiraahdo (Maxamed Xaaji Ciise “Maxamed Dheere”). Macaamiisha sharafta leh ee ku xiran warbaahinta (Tanadland.com) waxaan u rajeynayaa kuwii macaasha inay noqdaan aduun iyo aaqiroba.